Karatra mpanao gazety : Nohalavaina ny fe-potoana fandraisana ireo dosie -
AccueilSongandinaKaratra mpanao gazety : Nohalavaina ny fe-potoana fandraisana ireo dosie
Karatra mpanao gazety : Nohalavaina ny fe-potoana fandraisana ireo dosie
Taorian’ny fe-potoana farany fandraisana ireo antotan-taratasy fangatahana fahazoana ny karatra maha matihanina ny mpanao gazety, ny 5 febroary teo, nanatanteraka fivoriana nanaovana ny tomban’ezaka voalohany ny mpikambana teo anivon’ny Kaomisiona, omaly.
Tamin’izany indrindra no nahitana fa, hatreto, mahatratra 484 ny isan’ny fangatahan’ny mpanao gazety avy amina orinasan-gazety miisa 59 eto an-drenivohitra voarain’ny sekreteran’ny Kaomisiona. Ho an’ireo any amin’ny Faritra kosa indray, raha ny vaovao avy amin’ny tale rezionalin’ny minisiteran’ny Serasera, manodidina ny 95%-n’ireo mpanao gazety any an-toerana no efa nametraka ny antotan-taratasy takiana rehetra amin’ny fahazoana ny karatra maha matihanina.
Mba ho fanajana tanteraka ny fotoana ilaina amin’ny fanatanterahana ny asa rehetra sahanin’ny Kaomisiona amin’izany anefa, nanapa-kevitra izy ireo ny amin’ny hanalavana ny fe-potoana fandraisana sy fanangonana ireo dosie ho amin’ny 20 febroary izao. Izany no natao, araka ny voalaza hatrany, ny mba ahafahan’ireo izay tsy mbola nahafeno na/sy nahavita ny antotan-taratasiny amin’ny fangatahana fahazoana ny karatra.
Ankoatra izay, manoloana ny fanodikodinan-dresaka avy amin’ireo orinasan-gazety sasan-tsasany amin’ny dingana rehetra amin’ny fitsinjarana io karatra maha matihanina io, nanamafy ny filohan’ny Kaomisiona, Nicolas Rabemananjara, fa manan-jo hanana sy hahazo izany avokoa ny mpanao gazety rehetra mba ahafahany manatanteraka an-kalalahana an-tsakany sy an-davany ny asany. Voalaza ihany koa fa ny tompon’ny orinasan-gazety rehetra dia tsy maintsy manome ny taratasy fanamarinana amin’ny asa ho an’ireo mpanao gazety ao aminy ho an’ny filàna amin’ny taratasim-panjakana, sns.
Etsy an-daniny, mba ho fanazavana misimisy kokoa ny tena anjara asan’ny Kaomisiona amin’ireo tompon’orinasan-gazety, hisy ny dinika sy ady hevitra hotanterahina mahakasika izany amin’ity herinandro ity.